Xiaomi dia hanolotra ny Redmi vaovao amin'ny 10 Janoary | Androidsis
Vao nanomboka ny taona ary efa misy ny marika mamarana ny antsipirian'ny fampisehoana voalohany nataony. Ny iray amin'izy ireo dia Xiaomi. Vao nanambara ny fampidirana ny telefaona vaovao, ny voalohany amin'ny taona 2019. Fitaovana iray hahatratra ny elanelan'i Redmi, mpamatsy vola indrindra amin'ny mpamokatra sinoa.
Ity Xiaomi Redmi vaovao ity dia haseho afaka herinandro. Hatramin'ny marika nifidy ny 10 Janoary ho daty izay hahafahantsika mahafantatra ity finday vaovao ity. Hatreto dia mbola tsy voalaza ny telefaona iza no hatolotra, na dia efa misy aza ny tsaho momba izany.
Redmi 7, Redmi Pro 2 ary Redmi Go no anarana miovaova amin'ny haino aman-jery sasany. Ireo no kandidà lehibe hatolotra amin'ity hetsika ity amin'ny 10 Janoary. Na dia hatreto aza i Xiaomi dia tsy te hamoaka antoka amin'ny telefaona izay hatolotr'izy ireo amin'ity hetsika ity. Na dia azo inoana aza fa hamela soritra vitsivitsy izy ireo.
Andininy iray hafa izay nahasarika ny saina tao amin'ny afisy navoakan'ny orinasa hanambara ny fampisehoana dia izany hitantsika voasoratra ny isa 4800. Ity dia zavatra iray izay niteraka resabe koa. Ny haino aman-jery sasany dia nanipika tamin'ity herinandro ity fa ho avy ity fitaovana ity miaraka amin'ny fakantsary 48 MP.
Ankehitriny, taorian'ny fanambarana nataon'i Xiaomi, ny sasany milaza fa 4.800 XNUMX mAh ny bateriny. 48W ny famandrihana haingana dia tombanana ihany koa. Ka, araka ny hitanao, tsy misy zavatra mivaingana, fa ny fanambarana dia efa miteraka teôria maro. Soa ihany fa tsy hiandry ela intsony isika vao hahalala.
Amin'ny 10 Janoary dia ho fantatsika amin'ny fomba ofisialy ity fitaovana Xiaomi vaovao ity, ao anatin'ny faritra Redmi. Mety hisy fanambarana vitsivitsy momba izany amin'ity herinandro ity. Raha izany dia hitandrina isika raha hambara ny anarana manokana an'ity telefaona vaovao an'ny marika sinoa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi dia hanolotra maodely vaovao amin'ny faritra Redmi amin'ny 10 Janoary
19% amin'ireo mpampiasa no mandany maherin'ny 400 euro amin'ny finday